Sheekada filimka Welcome To New York: qarash iyo waqti meel cidlo ah ku baxay! – Filimside.net
Taariikhda: February 24, 2018
Waxaa maalintii shalay ahayd Jimco 23 Feb 2018 tiyaatarada la saaray filimka shactirada ah Welcome To New York oo ay hogaamiyaal ka yihiin Sonakshi Sinha, Diljit Dosanjh iyo Karan Johar halka shaqsiyaad badan oo Bollywood-ka caan ka ah muuqaalo marti kala duwan ku lahaayeen.
Director Chakri Tolet wuxuu la yimid fariin ka hadleyso liddi ku ah sida Bollywood-ka xaflada abaal marinada lagu bixiyo ee caanka ah IIFA u qabsadaan.
Diljit and Sonakshi waxay ku jilayaan filimkaan labo aan la buun buuninin laakiin Bollywood-ka magac ku yeelanayaan abaal marino kala duwana helayaan.
Fariinta Filimka WTNY oo Kooban: Teji (Diljit Dosanjh) wuxuu ku riyoodaa sidii uu atoore ku noqon lahaa halka Jinal (Sonakshi Sinha) ay tahay gabbar wax naqshadeyso laakiin nolosheeda aan qurxaneyn marwalbana halgan ku jiro.
Labadii nolosha la daala dhacayeen sidoo kalena shaqadooda aan weli hormarinin waxay ku guuleesanayaan tartan loolan loogu galay in xaflada IIFA Awards kusoo bandhigaan xirfadooda u gaarka ah.
Sophie (Lara Dutta) ayaa si ku tala gal ah usoo xulatay labada noloshooda fashilka ku dheehan si ay IIFA Awards kaga qayb qaataan ayadoo rabto xafladaan sharafkeeda inay hoos u dhacdo madaama maamulaheeda Gary (Boman Irani) ay isku dhacsan yihiin.
Kadib Teji (Diljit Dosanjh iyo Jinal (Sonakshi Sinha) markii ay xaflada IIFA Awards lagu qabanaayo magaalada New York tagaan xirfadooda ay goobta ka muujiyaan waxay kusoo jiidanayaan qaar ka mid ah shaqsiyaadka Bollywood-ka ugu caansan ee xafladaan martida ku ah ama abaal marinta lagu siinayo.
Dhinaca kale Karan Johar oo ka mid ah qaban qaabiyaasha xaflada IIFA Awards ee magaalada New York ka dhaceyso waxaa halis ku ah mid kale oo isaga u eg laguna magacaabo Arjun (Karan Johar) kaasi oo doonayo Karan inuu ku ciqaabo sababta uu filimada jaceylka ah u sameeyo.
Maxaa Laga Yiri Fariinta Filimka WTNY: Waa niyad jab weyn in shaqsiyaad caan ah ah aqbaleen sameynta filimkaan aan nuxur iyo ujeedo laheyn.
Kaliya qarash iyo waqti ayaa goobta ku baxay waxaana fariintiisa la siiyay 1.5/5 (Hal xidig iyo bar) waana mid ka mid ah filimada ugu nacasan oo ay Bollywood-ka dhawaanahan sameeyaan!
Xitaa shaqsiyaadka caanka ah ee muuqaalka martida filimkaan ku leh sida Salman Khan, Sushant Singh Rajput, Katrina Kaif, Aditya Roy Kapur iyo Riteish Deshmukh waxba kuma soo kordhinin ileen dad iska falaadayo ayay aqbaleen inay shaashada kala soo muuqdaan ee meesha filim ma yaalo!
Bandhiga Jilaayaasha: Diljit Dosanjh bandhigiisa shactirada waa mid wacan laakiin Super star-ka reer Punjab xirfadiisa waa lagu cayaaray!
Sonakshi Sinha filimka ayay ku dhex luntay sheeko liidato, doorkeeda aan adkeyn iyo ayadoon dadaal wacan sameynin waxaaba fiicneyd inay mashruucaan iska dhaafto.
Karan Johar iyo labdiisa door Karan iyo Arjun ayaaba xoogaa shactiro leh lana daawan karaa balse sida guud filimka WTNY waa mashruuc la iska sameeyay.
Boman Irani iyo Lara Dutta doorarkooda waa iska dhex dhexaad mana xumo mana wanagasano kaliya sheekada ayay qayb ka yihiin filimkaan xambaarsan yahay.
Gunaanad: Hadii aad xiiso u qabtid daawashada shaqsiyaadka caanka ah ee filimkaan la isugu keenay hal mar waa u dul qaadan kartaa daawashadiisa balse sida guud Welcome To New York waa mid ka mid ah filimada u jeedo la’aanta Bollywood-ka u sameeyeen!
Fadlan hoos ka daawo goos gooska filimka shactirada badan ee dhaliisha xoogan la kulmaayo WTNY:
Waxaa Aqrisay 1,147